LIFX Shumaca Midabka iyo Z TV, laba nal oo casri ah oo casri ah deyrtaan | Wararka IPhone
LIFX Shumaca Midabka iyo Z TV, laba nalal casri ah oo casri ah deyrta
LIFX waa tixraac marka laga hadlayo nalalka casriga ah. Soo-saaraha ayaa fadhiya mid ka mid ah jagooyinka ugu horreeya ee soo saarista aaladda noocan ah, oo waxay horeyba noo siisay buugga ballaadhan ee nalalka casriga ah ee nalalka iyo / ama ujeedooyinka qurxinta, kuwaas oo dayrta lagu ballaadhin doono laba shey oo cusub oo hadda la shaaciyey.
Xarago LED ah oo si gaar ah loogu talagalay in la dhigo telefishanka gadaashiisa iyo hel saamaynta "Ambilight" ee aad aadka u jeceshahay, iyo guluubka nooca “shumaca” oo aan midab beddelin oo keliya laakiin sidoo kale u oggolaanaya dhowr midab in si isku mid ah looga wada daayo aagag kala duwan, wax u gaar ah qaybtiisa.
Dhigista xargaha midabbada badan ee midabada leh ee ka dambeeya TV-ga waa fikrad fiican in marka lagu daro qabashada shaqada qurxinta ay aad ugu raaxeysaneyso inaad ku raaxeysato telefishanka iyada oo aan lahayn laydhadh ka turjumaya shaashadda, laakiin nalalka ka dambeeya telefishanka ee bixiya iftiin jawi raaxo leh oo aragga ah. Dabcan, maahan saameyn "ambilight" lafteeda, maadaama aysan wax ka beddelin midabka waxa shaashadda ka muuqda. Z TV waa nooca cusub ee LIFX Z Strip kaas oo si gaar ah loogu talagalay in la dhigo telefishanka gadaashiisa, oo leh qaybo L-u eg oo loogu talagalay geesaha, sidaas awgeedna lagu gaaro natiijooyin aad uga wanaagsan marka loo eego xargaha caadiga ah ee LED. Waa multizone, sidaa darteed waxaad yeelan kartaa midabo kala duwan isku mar.
Guluubka shumaca midabkiisu xariifka yahay wuu ka duwan yahay dhammaan nalalka LED-ka ee aad ilaa hadda aragtay Waxaa jira guluubyo badan oo caqli badan oo u oggolaanaya isbeddelka midabka, sidoo kale, laakiin awood u leh inay soo saaraan dhowr midab isku mar, midkoodna. LIFX waxay rabtay inay soo saarto badeecad gebi ahaanba ka duwan tan hadda la soo bandhigay waana lagu guuleystay. Waxay leedahay saldhig E14 caadi ah oo aad ku xiri karto laambadahaaga caadiga ah.
Labada sheyba waxay la jaan qaadayaan HomeKit, waxaan u maleyneynaa in sidoo kale aaladaha kale ee otomaatiga ah ee guryaha sida Alexa iyo sidoo kale inta ka hartay alaabada, waxaana la bilaabi doonaa Oktoobar. Nalka Shumaca Shumaca wuxuu ku kacayaa $ 44,99 halka Z TV strip uu ku kacayo $ 69,99.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » LIFX Shumaca Midabka iyo Z TV, laba nalal casri ah oo casri ah deyrta
Ka taxaddar fiilooyinka aad ku xirto iPhone-kaaga